कोरोनाको कहर: विश्वको जीडीपी ०.४% ले घट्नसक्ने Bizshala -
कोरोनाको कहर: विश्वको जीडीपी ०.४% ले घट्नसक्ने
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण विश्वको जीडीपीमा ०.४ प्रतिशतसम्मको गिरावट आउनसक्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ ।
इकोनोमिक टाइम्सको एक रिपोर्टका अनुसार आइएचएस मार्केटले भनेको छ कि चीनका उद्योगधन्दा फेब्रुअरी अन्तसम्म यदि बन्द भए भने र मार्चको सुरुवातबाट त्यहाँबाट बिस्तारै उत्पादन सुरु भयो भने पनि २०२० को पहिलो ६ महिनामा यसको प्रष्ट प्रभाव देखिनेछ । रिपोर्टका अनुसार विश्वको जीडीपीमा २०२० को पहिलो त्रैमासमा ०.८ प्रतिशत, दोश्रो त्रैमासमा ०.५ प्रतिशतसम्मको गिरावट आउनसक्छ । यो अवस्था रह्यो भने २०२० को विश्वको जीडीपी ग्रोथमा ०.४ प्रतिशतको धक्का लाग्नसक्छ ।
सन् २००३ मा फैलिएको सार्सको प्रकोपबाट विश्वको अर्थतन्त्रमा जति नोक्सानी भएको थियो, त्यसको तुलनामा कयौं गुणा बढी नोक्सानी कोरोना भाइरसका कारण हुनसक्ने अध्ययनले देखाएको छ । सन् २००३ मा चीन विश्वको छैठो ठूलो अर्थव्यवस्था थियो । त्यो बेला विश्वको जीडीपीमा चीनको योगदान ४.२ प्रतिशतमा सीमित थियो । तर, आज चीन विश्वकै दोश्रो ठूलो अर्थव्यवस्था हो र यो देशको विश्वको जीडीपीमा १६.३ प्रतिशत योगदान रहेको छ । यसर्थ यदि चीनमा मन्दी आयो भने विश्वको अर्थतन्त्रमा यसले सुनामीजस्तै असर पार्नेछ ।
कोरोना भाइरसका कारण चीनको अर्थव्यवस्थामा मन्दी आयो भने यसले विश्वको विकास दरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । २००२ मा विश्वको विकास दरमा चीनको योगदान २३ प्रतिशत थियो । २०१९ मा भने ३८ प्रतिशत योगदान छ ।
कोरोना भाइरसका प्रकोपका कारण चीनका ११ प्रान्तले विदाको अवधि बढाइदिएका छन् । यी प्रान्तहरुमा चीनको दुई तिहाई भन्दा बढी गाडीहरुको उत्पादन हुन्छ । यदि त्यहाँका गाडी निर्माण गर्ने उद्योगहरु १० फेब्रुअरीसम्म मात्रै बन्द भए भने पनि करिब ३.५ लाख गाडीको उत्पादन हुन पाउनेछैन ।
तर, बन्द हुने अवधि फेब्रुअरी अन्तसम्मै रहने संकेत देखिँदैछ । आसपासका अन्य प्रान्तका गाडी निर्माण गर्ने प्लान्टहरु पनि बन्द भए भने पहिलो त्रैमासमा १७ लाख युनिट गाडीको उत्पादन हुनेछैन । यसको अर्थ पहिलाको तुलनामा उत्पादनको रफ्तारमा ३२.३ प्रतिशतको गिरावट आउनेछ ।
सन् २०१९ मा तेलको वैश्विक मागमा आधा योगदान चीनको मात्र छ । २००३ मा चीनको योगदान एक तिहाई मात्र थियो । २०१९ मा चीनमा कच्चा तेलको माग दैनिक १.३९ करोड ब्यारेल रहेको छ, जुन विश्व बजारकै १४ प्रतिशत हो । २००३ मा तेलको माग दैनिक ५६ लाख ब्यारेल मात्र थियो भने विश्व बजारको ७ प्रतिशत मात्र थियो । यसबाहेक चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता देश पनि हो । यो देशले विश्वको कुल वस्तु आयातमा १०.४ प्रतिशतको योगदान दिन्छ । २००३ मा विश्वको कुल आयातमा चीनको योगदान ४ प्रतिशतमा सीमित थियो ।
जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले त्यहाँका सार्वजनिक ...
८७६० करोड डलरका मालिक बोक्छन् रु. २४०० को फोन, उपहार पाएपछि
काठमाण्डौ । विश्वका धनाढ्यको सूचिमा चौथो स्थानमा रहेका सेयर बजारका...
कोरोनाले तेल र उर्जाको बजार डामाडोल, सेयर बजारमा दैनिकजसो
काठमाण्डौ । मानव अस्तित्व नै संकटमा पार्ने गरी चीनको वुुहान शहरबाट...
कोरोना भाइरसको भ्रम फैलाएपछि फेसबुकद्वारा कडाई र निगरानी
काठमाण्डौ । चीनमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस अहिले आधी...
हङ्‍कङले आफ्ना सबै स्थायी बासिन्दालाई १२ सय अमेरिकी डलर दिने
आर्थिक समस्यासँग जुझ्न हङ्‍कङको सरकारले त्यहाँका स्थायी...
जब भारतीयको भीडमा डोनल्ड ट्रम्प ‘सेल्सम्यान’ बने.......!
काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सोमबारदेखि...
बेलायतले अब सीप नभएका कामदारलाई भिसा नदिने
काठमाण्डौ । ब्रिटिश सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ आप्रवसन योजनामा...
नाफा घटेपछि एचएसबिसी बैंकले ३५ हजार कर्मचारीलाई घर पठाउने,
काठमाण्डौ । नाफामा अत्यासलाग्दो गिरावट आएसँगै एचएसबिसी बैंकले ३५...